प्रकाश को खगोलियहरुको लागि के हो?
विज्ञान खगोल विज्ञान
लाइट र खगोल विज्ञान
by क्यारोलिन कोलिन्स Petersen
कसरि खगोल विज्ञान प्रयोग प्रकाश
जब स्टर्जीजर्सहरू रातको वरिपरि बाहिर जान्छन्, तिनीहरू टाढा तारा, ग्रह र आकाशगंगाबाट प्रकाश देख्छन्। खगोल विज्ञानको खोजीको लागि लाइट महत्वपूर्ण छ। चाहे सितार वा अरू उज्यालो वस्तुहरु हो भने, हल्का केहि खगोल विज्ञानहरू सबै समय प्रयोग गर्छन्। मानव आँखा "हेर्नुहोस्" (प्राविधिक रूपमा, तिनीहरूले "पत्ता लगाउनुहोस्") देखिने प्रकाश। यो प्रकाश को एक ठूलो स्पेक्ट्रम को एक भाग को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम (या ईएमएस) भनिन्छ, र विस्तारित स्पेक्ट्रम भनेको खगोल विज्ञान को ब्रह्मांड को अन्वेषण को लागि प्रयोग गरिन्छ।
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम
ईएमएस को तरंगदैर्ध्य र आवृत्ति को पूर्ण रेंज शामिल छ जुन अस्तित्व मा छ: रेडियो तरंगहरु , माइक्रोवेव , अवरक्त , दृश्य (ओप्टिकल) , पराबैंगनी, एक्स रे र गैमा किरणहरु । मानवअधिकार हेर्ने प्रकाशको विस्तृत स्पेक्ट्रम को एक सानो सानो स्वरवाला छ जुन स्पेस र हाम्रो ग्रहमा वस्तुहरू (विकृत र प्रतिबिम्बित) दिइएको छ। उदाहरणको लागि, चन्द्रबाट उज्यालो साँच्चै सूर्यबाट हल्का हुन्छ जुन यसलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। मानव निकायहरू पनि (विकिरण) अवरक्त (कहिलेकाहीँ गर्मीको विकिरणको रूपमा उल्लेख गरिएको) उत्सर्जन गर्दछ। यदि मानिसहरू अवरक्तमा हेर्न सक्दछन् भने, चीजहरू फरक फरक देखिन्छ। अन्य तरंगदैर्ध्य र आवृत्तिहरू, जस्तै एक्स- किरणहरू पनि उत्सर्जन हुन्छन् र प्रतिबिम्बित हुन्छन्। एक्स रेहरू हड्डीहरू उज्ज्वल गर्न वस्तुहरूको माध्यमबाट पार गर्न सक्छ। अल्ट्राफ्लेलेट लाइट, जो पनि मानिसहरु लाई अदृश्य छ, एकदम ऊर्जावान छ र सूरजमुखी छाला को लागि जिम्मेदार छ।
खगोलविदहरूले प्रकाशको धेरै गुणहरू जस्तै लाइटोसियस (चमक), तीव्रता, यसको आवृत्ति वा तरंगदैर्ध्य र ध्रुवीकरण जस्ता उपाय गर्छन्।
प्रकाश को प्रत्येक तरंगदैर्ध्य र आवृत्ति को खगोल विज्ञान को ब्रह्मांड को विभिन्न तरीकों मा वस्तुहरु को अध्ययन गर्दछ। लाइटको गति (जुन दोस्रो सेकेन्ड29, 72 9, 458 मिटर) हो भने दूरी निर्धारण गर्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हो। उदाहरणको लागि, सूर्य र बृहस्पति (ब्रह्मांडमा र धेरै अन्य वस्तुहरू) रेडियो आवृत्तिहरूको प्राकृतिक पातहरू हुन्।
रेडियो खगोलविदहरूले ती उत्सर्जनहरू हेर्छन् र वस्तुहरूको तापमान, वेग, दबाब र चुम्बकीय क्षेत्रहरूको बारेमा जान्दछन्। रेडियो खगोल विज्ञानको एक क्षेत्र तिनीहरूले पठाउन सक्ने कुनै संकेतहरू पत्ता लगाएर अन्य संसारमा जीवन खोज्न केन्द्रित हुन्छन्। त्यो खोजी एक्स्ट्राटररेटिकल इजाजतपत्र (SETI) को लागी भनिन्छ।
कुन लाइट गुणहरू खगोलविदहरू बताउँछन्
खगोलशास्त्रीय शोधकर्ताहरू अक्सर वस्तुको चमकमा रुचि राख्छन्, यो उपाय भनेको विद्युत चुम्बकीय विकिरणको रूपमा कति ऊर्जा राख्छ। यसले तिनीहरूलाई वस्तुको वरिपरि गतिविधि बारे केहि बताउँछ।
यसको अलावा, हल्का एक वस्तुको सतहबाट "बिखराएको" हुन सक्छ। बिखरेको लाइटमा गुणहरू छन् जसले ग्रहणी वैज्ञानिकहरूलाई बताउँछ कि कुन सामग्रीले सतह बनाउँछ। उदाहरणका लागि, तिनीहरू बिखरेको प्रकाश देख्न सक्छ जसले मार्टीन सतहको चट्टानमा खनिजहरूको उपस्थितिलाई प्रकट गर्दछ, एक क्षुद्रग्रहको परिकारमा वा पृथ्वीमा।
इन्फ्रारेड लाइटलाई हट वस्तुहरू जस्तै प्रोटोस्टारहरू (ताराहरू जन्मिने) को बारे मा, ग्रह, चन्द्रमा र भूरी बौलाव वस्तुहरु द्वारा बन्द गरिएको छ। जब खगोलविरामहरूले ग्यास र धूलको क्लाउडमा अवरक्त डिटेक्टरको उद्देश्य राख्दछन्, उदाहरणका लागि, क्लाउड भित्र प्रोटोस्टेलर वस्तुहरूबाट अवरक्त रोशनीले ग्यास र धूल पार गर्न सक्छ।
यसले खगोलविदहरूले स्टेलर नर्सरी भित्रको एक नजर दिन्छ। इन्फ्रारेड खगोल विज्ञानले युवा सितारहरू पत्ता लगाउँदछ र संसारमा खोज्छ जुन ओप्टिकल तरंगदैर्ध्यमा देखा पर्दैन, जसमा हाम्रो सौर प्रणालीमा क्षुद्रग्रहहरू पनि छन्। यसले हामीलाई उनीहरूको आकाशगंगाको केन्द्र जस्तै ग्यास र धूलको मोटो बादलको पछि लुकेको ठाउँमा झलक दिन्छ।
ओप्टिकल भन्दा बाहिर
ओप्टिकल (दृश्यात्मक) प्रकाश कसरी मानवहरूले ब्रह्मांडलाई हेर्छन्; हामी ताराहरू, ग्रहहरू, कमट्सहरू, नेबुले, र आकाशगंगाहरूलाई हेर्छौं, तर केवल तरंगका किरणहरूमा मात्र हाम्रो आँखा पत्ता लगाउन सक्छ। यो हल्का छ जुन हामी हाम्रो आँखामा "हेर्न" विकसित भयो।
दिलचस्प छ कि, पृथ्वी मा केहि प्राणीहरु पनि अवरक्त र पराबैंगनी मा देख्न सक्छ, र अन्य को लागी चुम्बकीय क्षेत्रहरु (तर नहीं देख सकते हो) र लाग््छ कि हामी सीधी नहीं समझ सकते। हामी सबै कुकुरहरू संग परिचित छौं जसले आवाज सुन्न सक्दछ कि मानिसहरूले सुन्न सक्दैनन्।
पराबैंगनी प्रकाश ब्रह्मांड मा ऊर्जावान प्रक्रियाहरु र वस्तुहरु को द्वारा दिए गएको छ। यस वस्तु को प्रकाश को रूप मा एक वस्तु को एक निश्चित तापमान हुनु पर्छ। तापमान उच्च ऊर्जा घटनाहरु संग सम्बन्धित छ, र यसैले हामी यस्तो वस्तुहरु र घटनाहरु देखि एक्स-रे उत्सर्जन को रूप मा नयाँ रूप को रूप मा खोज्छ, जो धेरै ऊर्जावान हुन्छन्। तिनीहरूको पराबैंगनी लाइटले ग्याँसको अलग अणुहरू (फोटोडिसोसन नामक प्रक्रियामा) आँसु पुर्याउन सक्छ, किनकि हामी प्रायः उनीहरूका जन्मका बादलहरूमा नवजात शिलाकारहरू "खाँदै" देख्छौं।
एक्स-रेहरू पनि अधिक ऊर्जावान प्रक्रियाहरू र वस्तुहरू द्वारा उत्सर्जित हुन्छन्, जस्तै कि उच्च गतियुक्त सामग्री ब्ल्याक छेदबाट टाढाको स्ट्रिङ। सुपरनोवा विस्फोटले एक्स-रेहरू पनि छोडे। हाम्रो सूर्यले एक्स-रेहरूको जबरदस्त स्ट्रिमहरूलाई जबर्जस्ती सौर भित्ता पुर्याउँछ।
ब्रमामा सबै भन्दा अधिक ऊर्जावान वस्तुहरु र घटनाहरु द्वारा गामा रे मा बंद गरिन्छ। Quasars र हाइपरनोवा विस्फोटहरू प्रसिद्ध " गामा-रे फट " सँगसँगै गामा-रे इमिटरहरूको दुई राम्रो उदाहरण हुन्।
विभिन्न प्रकारको लाइट पत्ता लगाउने
खगोलशास्त्रीहरूले यी प्रकारका प्रकाशहरूको प्रत्येक अध्ययन गर्न विभिन्न प्रकारका डिटेक्टरहरू छन्। सर्वोत्तमहरू हाम्रो ग्रह वरिपरि कक्षामा, वायुमण्डलबाट टाढा छन् (जसले प्रकाशलाई पारित गर्दछ जस्तै यो पास हुन्छ)। पृथ्वीमा केहि धेरै राम्रो ओप्टिकल र अवरक्त पर्यवेक्षकहरू (ग्राउन्ड-आधारित पर्यवेक्षकहरू भनिन्छ), र तिनीहरू धेरै वायुमण्डलीय प्रभावबाट बचाउन धेरै उच्च उचाइमा अवस्थित छन्। डिटेक्टरहरू "हेर्नुहोस्" लाइट आइरहेका छन्। प्रकाशलाई स्पेक्ट्रोग्राफमा पठाउन सकिन्छ, जुन एक धेरै संवेदनशील साधन हो जसले आगामी रोशनी यसको घर्षण तरंगदैछ।
यसले "स्पेक्ट्रा" बनाउँछ, खगोल पदार्थहरूले वस्तुको रासायनिक गुणहरू बुझ्नका लागि ग्राफहरू। उदाहरणका लागि, सूर्यको एक स्पेक्ट्रमले विभिन्न ठाउँहरूमा कालो रेखाहरू देखाउँछ; ती रेखाहरूले सूर्यमा अवस्थित रासायनिक तत्वहरूलाई संकेत गर्छन्।
प्रकाश केवल खगोल विज्ञान मा प्रयोग गरिएको छैन तर विज्ञान र एक विस्तृत श्रृंखला मा, चिकित्सा व्यवसाय सहित, खोजी र निदान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिकी र ईन्जिनियरिङ् को लागि। यो साँच्चिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार मध्ये एक हो जुन वैज्ञानिकहरू उनीहरूले ब्रह्माण्ड अध्ययन गर्ने तरिकाहरूको शस्त्रागारमा छन्।
Enceladus: शनि को रहस्य विश्व
पृथ्वीको दोस्रो चन्द्र
क्यारेन नेबुला अन्वेषण गर्दै
कसरी एक्स रे खगोल विज्ञान काम गर्दछ
कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बुझ्न
30 मिनेट पाउनुभयो? स्पेस र खगोल विज्ञानको बारे जान्नुहोस्!
सौर प्रणालीको जोभियन संसार
6 तपाईंले टेलिकप्पको बारेमा थाहा पाउनु भएको कुरा
स्टार ट्रेकमा उप-प्रकाश गति
टिबीको ताराको रहस्यमय बहस
सोब्रेरो ग्यालक्सी अन्वेषण गर्नुहोस्
अपोलो 8 1 968 मा एक आशाजनक अन्त्यमा
वैज्ञानिक विधि शब्द खोजी
ए्यान रैंन्ड, कल्याण रानी: सरकारी सहायतामा रहन उच्च छ?
कर्मा के हो?
पप संगीत के हो?
10 बुबाको लागि क्लासिक कविता
Rutgers University Camden GPA, SAT र ACT Data
तिम्रो जीवन के हो?
10 उत्तम शुरुआती बाइकहरू
'80s को शीर्ष राजकुमार गीत, खंड 2
WNBA, एनबीए र किन हामी दुई तुलना गर्दछौं
ताइवान | तथ्य र इतिहास
1981 को युद्ध युद्ध अधिनियम
थप (अनुकूल) डेटा भण्डारमा वृक्ष नोडमा भण्डार गर्नुहोस्
कसरी5"ट्रिक" सौदाश्रम प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्
रनस परीक्षण के हो?
केलीले कन्वर्ट चुटकुले
भगवती गीता को संक्षिप्त परिचय
ड्यूच मार्क र यसको विरासत
शर्कटोथ हिलको भ्रमण
तपाईंको वेब पृष्ठमा एकाईनरेसन मेमोरी गेम थप्नुहोस्
अमेरिकन सैनिक युद्ध: ब्रिगेडियर जनरल जॉन सी। क्याल्लवेल
FORD उपनाम अर्थ र उत्पत्ति
विभिन्न प्रकारका Galaxies अन्वेषण गर्नुहोस्
एक्सेल DAYS360 प्रकार्य: मितिहरू बीच गणना दिन
वर्णक परिभाषा र रसायन विज्ञान